Tusaha Tilmaamaha: Sida looga saari karo Spam u gudbinta Google Analytics
Ka feejignaato spam gudbinta sida website sharci ah oo soo booqday ayaa ka soo horjeeda warbixinnada ay samaysay Google Analytics. Waqtiga qaar, Google ayaa eegay arinta, iyada oo aan la iman xalka qaarkood.
Dhibaatada hadda jirta ayaa ah in dadku aysan garanayn waxa spam u gudbinta waa, sida loo ogaado, iyo sida looga takhaluso. Waxay khatar weyn u tahay ganacsiga marka ay bilaabaan isticmaalka warbixinno aan sax ahayn si ay u go'aamiyaan ololaha suuq-geynta sicirada kordhinta, go'aaminta go'aan qaadashada, dejinta bogga soo noqoshada, iyo wax ka badan. Xaaladaha qaarkood, suuqyadu waxay sii wadaan inay soo bandhigaan xogta madaxdooda, taas oo noqon karta calaamadda ilaa 60 boqolkiiba.
Alexander Peresunko, oo ah khabiir ku takhasusay Semt wuxuu sharxayaa waxa loo yaqaan spam, sida loo aqoonsado, maxay yihiin siyaabaha looga takhaluso spam u gudbinta warbixinnada Google Analytics, iyo sida looga hortago xaaladdan dib u soo celinta - luxury watches.
Qaar ka mid ah spamka marnaba run ahaantii ma booqdaan goobta oo waxaa badanaa lagu magacaabaa "Ghost" spam. Si kastaba ha ahaatee, wali waxay u muuqataa in warbixinnadu yihiin gaadiid sharci ah oo saameeya heerarka soo noqnoqodka, is beddelka, waqtiga goobta, iyo kalfadhiyada wadajirka ah ee dadka kale. Ganacsi weyn, oo diiwaangeliya kulamo badan ayaa laga yaabaa inaanay u arkin in ay tahay dhibaato weyn. Si kastaba ha ahaatee shirkadaha yaryar, waa sabab loo walwalo. Waxay ku xisaabtami kartaa in ka badan 60% kalfadhiyada maalinlaha ah ee saameeya warbixinta bil kasta, imtixaanka A / B, iyo imtixaanada kale ee celinta.
Sababta sababta xogtan aan u soo booqanaynin shabakadda laakiin waxay muujinaysaa GA-da waxay u sabab tahay Xeerka Qiyaasaha, oo ay diyaarisay Google. Waxay la socotaa dabeecadaha macaamiisha laga helo ilo xogeed oo laga duubo oo u gudbiya Google Analytics. Si kastaba ha ahaatee, waxay albaabada u furto spammers khiyaamaysan kuwaas oo ku qasbaya xog cayriin ah iyaga oo weeraraya codsiyada daba-galka shaqada ee shaqada, sidaas awgeedna bogga intarnetka..
Tani waa siyaabo badan oo lagu aqoonsan karo spam, laakiin ugu dhaqsaha badan waa iyada oo loo marayo tabta "Qaadashada" si aad u aragto "Dhamaan Wadooyinka", ka dibna ilaha / dhexdhexaad. Haddii mid ka mid ah uusan si dhakhso ah u aqoonsanin goobta spammy, dhajinta URL ee browserka waa inuu xaqiijiyaa dhammaan shaki. Si kastaba ha noqotee, spameriyeyaasha qaarkood waxay heleen qibrad aad u sarreeya, markaa eegaya qiimaha boodhka, bogag / kalfadhi, iyo jadwalka kalfadhiga cusub waa fikrad wanaagsan. Haddii ay joogaan 100%, markaa taraafigaan ma booqanayo goobta.
Ka qaadista Taraaficda Been-abuurka ah Google Analytics
Nidaamka la soo jeediyey wuxuu u shaqeeyaa 100% waqtiga xisaabta iyo da'da cusub. Kaliya keli ayaa ah in ay u baahan tahay cusbooneysi joogto ah tan iyo meeraha cusub ay sii socdaan. Ma jiraan wax isbedel joogto ah, laga yaabee in Google uu bixiyo mid.
Abuuri nuqul ka mid ah aragtida hadda jirta oo ah in aan la sii wadi karin oo aan la filaynin sida qiyaasta amniga haddii shaandhadu ay xaddidayso xogta saxda ah. Maydhayaasha ayaa xayiray dhammaan taraafikada mustaqbalka ee loo yaqaan "spam references". Falanqaynta koowaad, riix Maamulaha, dooro Fiiraalka Filed, oo gali magac la doorbidey filter si uu u baahdo dhowr. Mid ka mid ah waa inuu doortaa Ka dhaaf, oo dooro Wareegga Ololaha. Nooca Filtada waa meeshii laga soo galo filter-ka.
Nadiifinta Warbixinnada Hore ee Google Analytics
Mid ka mid ah ayaa sidoo kale laga saari karaa spam ka soo baxa warbixinta taariikhiga ah iyada oo la adeegsanayo qayb hal qaas ah. Raac tallaabooyinkan: guji Abaabulka, Dhamaan Gaadiidka, Isha / Dhexe. Markaa halkaas, guji qayb ka mid ah, iyo + Qeybta Cusub. Ka dib marka la dhameeyo waxtarka ku habboon, guji keyd.
Dagaalka Dagaalka Spamers
Ma jiraan wax saameyn ku leh goobta A / B in ka badan warbixinta aan sax ahayn. Ma ahan ilaa Google laga sii daayo xalka ugu dambeeya ee dhibaatada ka dhalatay spam gudbinta. Waqtigan xaadirka ah, nidaamyada kor ku xusan waxay u adeegaan sida hagaha ugu fiican si loo hubiyo in Google Analytics uusan lahayn spam references.